အွန်လိုင်းမှာ ပျံ့နှံ့နေတဲ့မြိတ်မြို့က တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူလေး နဲ့ နှာဗူး ဆရာဝန် ကိစ္စ ရုပ်သံဖိုင် - HARTHANANTAW
အွန်လိုင်းမှာ ပျံ့နှံ့နေတဲ့မြိတ်မြို့က တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူလေး နဲ့ နှာဗူး ဆရာဝန် ကိစ္စ ရုပ်သံဖိုင်
မြိတ်မြို့မှာရှိတဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူလေးတစ်ဦးကိုဆေးကုသပေးကာအတင်းကိုင်တွယ်တဲ့ဆရာဝန်တစ်ဦးကိုရဲတပ်ဖွဲ့မှဖမ်းဆီးကာအမှု့ဖွင့်အရေးယူထားကြောင်းသိရပါတယ် … ။ စက်တင်ဘာလရရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမျက်စိနာ(ဒေသအခေါ်မျက်ကန်းဝေဒနာ)အတွက်ဆေးကုသရန်လာရောက်တဲ့အသက်၁၈နှစ်အရွယ်ဒုတိယနှစ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူလေးတစ်ဦးကိုမြိတ်မြို့၊ကံကြီးရပ်ကွက်၊ကံကြီးစည်လမ်းတွင်ဆေးခန်းဖွင့်ထားတဲ့ဒေါက်တာဝင်းလိုက် ဆိုသူဆရာဝန်တစ်ဦးကအတင်းကိုင်တွယ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ် … ။
ဆေးခန်းမှာလူပြတ်နေတဲ့အချိန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူလေးကိုဆေးကုပေးနေစဉ် ဘယ်ဘက်လက်နှင့် သူမရဲ့မိန်းမကိုယ်အတွင်းကိုလက်ချောင်းတစ်ချောင်းဖြင့်ထိုးသွင်းခဲ့ကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ် … ။ ကျောင်းသူလေးကထိုသို့မလုပ်ရန်ပြောကာရုန်းပေမယ့်ဆေးထိုးအပ်ချကာညာဘက်လက်နဲ့ထပ်မံထိုးသွင်းပါတယ် …. ။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူလေးမှာ ရုန်းကန်တွန်းဖယ်ကာဆေးဖိုးကျပ်လေးထောင်ပေး၍ အိမ်သို့ပြန်ကာအဖွားဖြစ်သူနဲ့အဒေါ်ဖြစ်သူတို့ကိုတိုင်ကြားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ် …. ။
အှနျလိုငျးမှာ ပြံ့နှံ့နတေဲ့မွိတျမွို့က တက်ကသိုလျကြောငျးသူလေး နဲ့ နှာဗူး ဆရာဝနျ ကိစ်စ ရုပျသံဖိုငျ
မွိတျမွို့မှာရှိတဲ့ တက်ကသိုလျကြောငျးသူလေးတဈဦးကိုဆေးကုသပေးကာအတငျးကိုငျတှယျတဲ့ဆရာဝနျတဈဦးကိုရဲတပျဖှဲ့မှဖမျးဆီးကာအမှု့ဖှငျ့အရေးယူထားကွောငျးသိရပါတယျ … ။ စကျတငျဘာလရရကျနမေ့နကျပိုငျးကမကျြစိနာ(ဒသေအချေါမကျြကနျးဝဒေနာ)အတှကျဆေးကုသရနျလာရောကျတဲ့အသကျ၁၈နှဈအရှယျဒုတိယနှဈတက်ကသိုလျကြောငျးသူလေးတဈဦးကိုမွိတျမွို့၊ကံကွီးရပျကှကျ၊ကံကွီးစညျလမျးတှငျဆေးခနျးဖှငျ့ထားတဲ့ဒေါကျတာဝငျးလိုကျ ဆိုသူဆရာဝနျတဈဦးကအတငျးကိုငျတှယျခဲ့ကွောငျးသိရှိရပါတယျ … ။
ဆေးခနျးမှာလူပွတျနတေဲ့အခြိနျတက်ကသိုလျကြောငျးသူလေးကိုဆေးကုပေးနစေဉျ ဘယျဘကျလကျနှငျ့ သူမရဲ့မိနျးမကိုယျအတှငျးကိုလကျခြောငျးတဈခြောငျးဖွငျ့ထိုးသှငျးခဲ့ကွောငျးပွောပွခဲ့ပါတယျ … ။ ကြောငျးသူလေးကထိုသို့မလုပျရနျပွောကာရုနျးပမေယျ့ဆေးထိုးအပျခကြာညာဘကျလကျနဲ့ထပျမံထိုးသှငျးပါတယျ …. ။ တက်ကသိုလျကြောငျးသူလေးမှာ ရုနျးကနျတှနျးဖယျကာဆေးဖိုးကပျြလေးထောငျပေး၍ အိမျသို့ပွနျကာအဖှားဖွဈသူနဲ့အဒျေါဖွဈသူတို့ကိုတိုငျကွားခဲ့ကွောငျးသိရပါတယျ …. ။